(Sawirro) Wasaaradda Haweenka Puntland oo xustay Maalinta Haweenka Aduunka | puntlandi.com
Magaalada Garoowe ayaa waxaa Maantay ka dhacday Munaasabad balaaran oo lagu xusayey Maalinta Haweenka Aduunka oo sanad kasta caalamka laga xuso 8-da Maarso,waxaana Munaasabadda soo qabanqaabisay Wasaaradda horumarinta Haweenka iyo Arimaha Qoyska.
Munaasabadaan ayaa waxaa kasoo qaybgalay Madaxweyne kuxigeenka Puntland,Gudoomiyaha Baarlamaanka ,Qaar kamid ah Golaha Wasiiradda Puntland,Haween ka kala yimid dhamaan gobaladda Puntland,saraakiil ka socotay hay,adaha daneeya arimaha Haweenka,hobalada waabari iyo Marti sharaf kale oo lagu casumay xuska Maalinta Haweenka Aduunka.
Kooxda Hobaladda waabari ayaa munaasabadda kasoo jeediyey Riwaayado kala duwan iyo Heeso ka turjumayey qiimaha ay leeyiin Haweenka Soomaaliyeed iyo Tacdiyada ay la kulmaan sida Kufsiga iyo gudniinka Fircooniga ah.
Gudoomiyaha ururada Haweenka Puntland Khadro Warsame Jaamac oo kulan ka hadashay ayaa sheegtay in haweenka Puntland ay midaysan yihiin iyagoo xafladaan si wadajir ah uga soo qaybgalay.
Wasiirka Horumarinta Haweenka iyo Arimaha Qoyska Puntland Maryan Axmed Cali ayaa hambalyo u dirtay Haweenka Soomaaliyeed gaar ahaan Haweenka Puntland,waxaana ay tilmaantay in Wasaaradda Haweenku ku tilaabsatay horumar balaaran oo ay hormuud u yihiin Haweenka Puntland.
Wasiirka Haweenka Puntland Maryan Axmed Cali ayaa kula dardaarantay Haweenka Puntland inay iskaashadaan oo ay mideeyaan dadaalkooda ku aadan sidii ay ku heli lahaayeen xuquuqdooda dastuuriga ah.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland Axmed Cali Xaashi oo kulanka hadal ka jeediyey ayaa ku amaanay Wasaaradda Haweenka Puntland dadaalka dheer ee ay ku bixisay horumarinta Haweenka Puntland,waxaa sidookale uu ugu baaqay Haweenka Puntland in xuuquuqda ay ku leeyihiin Baarlamaanka 2019 ay ku si geesinimo leh ku raadsadaan.
Madaxweyne kuxigeenka Puntland Cabdixakiin Cabdulaahi Xaaji Cumar Camay oo asna Ka Qeybgalay Munaasibadaasi waxaa uu ku tilmaamay inay tahay maalin qiimo weyn, islamarkaana la xusayo doorka muhiimka ah ee Hooyada Soomaaliyeed ku leedahay qoyska dhexdiisa.
Maalinta haweenka ee 8 Maarso ayaa leh taariikh fog, oo ka soo bilaamata qarnigii 19-aad, waxaana maalintaan laga xusaa caalamka iyo gayiga Soomaalida iyadoona si weyn maantay looga xusay Magaalada Garoowe.